China Heat shrink muchina fekitori uye vanotengesa | Boya
Boya's heat shrink muchina wakagadzirwa nesimbi isina chinhu ine muviri wakasimba nekusimba .Nemavhiri mana pazasi pemuchina anogona kufamba zviri nyore chero kupi kwaunenge uchikuda .Iine mukana weiri nyore kushandisa .Inokodzera fekitori diki kana yekudyira.
Muchina wekudzora unopindirana neiyo shrink firimu sePVDC shrink firimu, EVOH shrink firimu kana EVA shrink firimu.
Inonyanya kushandiswa kurongedza nyama dzakasiyana nyama senyama yenguruve, nyama yemombe, gwayana, huku, nyama inotonhora ……
Mushure mekudziya iyo shrink firimu ichave yakadzikira uye yakaputirwa pane chigadzirwa chako chakarongedzwa zvine simba. Rudzi urwu rwekutakura runogona kuratidza zvizere kutaridzika kwechinyorwa chako, kugadzirisa chigadzirwa kushambadzira mashandiro uye kuwedzera kukosha kune chako chigadzirwa.
●Inoshanda vhoriyamu: 160L
●Kushanda kushanda: 6-8times / miniti
●Simba: 380V / 50HZ 12KW
●Saizi yetangi yemvura: 650mmx460mmx500mm
1.Nekushanda kwepamusoro uye kwakadzika kuona memory, kunatsiridza zvakanyanya kugadzirwa kwekuita.
2. Chikamu chepazasi chinoshandiswa pakufambisa mweya, uye vhoriyamu yemhepo inogona kugadziridzwa neye frequency converter.
3. Kuendesa kunodzorwa neiyo frequency converter, uye kumhanya kuri kuchinjika.
4. Iyo yepamusoro mhango inogona kuvhurwa nyore pakuchenesa uye kugadzirisa.
5. Iyo nzira yese yekupakata inogona kuoneka kuburikidza nepamberi hwindo.
Nemakore makumi maviri ane ruzivo injinjiniya, Boya anopa mhinduro inodhura kwazvo zvese zvemidziyo uye zvinhu zvemutengi wedu zvichibva mukushandisa kwavo uye nezvinodiwa. Kuti uve nechokwadi chekuvimbika, kuberekwazve uye kushanda zviri nyore kune wese mutengi.
Zvadaro: thermoforming muchina